यस्तो देश जहाँ महिलाले पुरुषहरुलाई बलात्कार गरेर मर्नु न बँच्नु बनाएका छन्, जान्नुहोस् रहस्य! – PathivaraOnline
Home > रोचक > यस्तो देश जहाँ महिलाले पुरुषहरुलाई बलात्कार गरेर मर्नु न बँच्नु बनाएका छन्, जान्नुहोस् रहस्य!
admin February 13, 2019 रोचक 0
यो अधिकारको सहयोगमा यो जातका महिलाले कैयौ पुरुषसँग यौनसम्पर्क राख्न पाउनेछन् । यो जातका महिलासँग बाहिरका पुरुष यौनसम्पर्क राख्न चाँहदैनन् । दुनियाँ पनि अचम्म अचम्मको छ । नेपाल, भारत लगायतका देशमा पुरुषले बलात्कार गरेर अत्याचार गरेका खबरहरु दिनहुँ जसो सार्वजनिक भैरहन्छन् तर यूरोपको एक देशमा भने महिला नै बलात्कारमा अगाडी छन् ।पपुवा न्युगिनीमा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ पुरुषले महिलाको यौनप्रस्ताव अस्वीकार गरे कडा कारवाही हुन्छ । समाचारपत्रमा खबर छ ।
साइकलमा श्रीमतिको शव बोकेको भाइरल तस्विरको सत्यता यस्तो रहेछ, हेर्नुहाेस्